भोट हाल्न घर जानेको संख्या बढ्दो, तर गाडी नपाइने समस्या, भाडा दोब्बर
Fri, Jun 22, 2018 | 07:14:42 NST
08:47 AM ( 1 year ago )
काठमाडौं, वैशाख ३० – चुनावमा भोट हाल्नका लागि घर जान हिँडेकी धादिङकी आन्तरी तामाङ घण्टौँ कुरेपनि गाडी पाउनुभएन । घरीघरी कलंकी चोकतिर हेर्दै गाडी आयो कि भनेर बाटो कुर्नुभएकी उहाँले चार घण्टा बितिसक्दा पनि गाडी नपाउँदा हैरान देखिनुहुन्थ्यो ।
‘बिहानैदेखि गाडी कुरेको अहिलेसम्म पनि पाएकी छैन । भोट हाल्न जाउँ भनेको । खोई, गाडी नआएको हो कि नभएको हो । बुझ्नै सकिन ।’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो । तामाङ जस्तै आइतबार हुने चुनावमा भोट हाल्न घर जानेहरुलाई कलंकीमा लामै भिड लागेको देख्न सकिन्थ्यो ।
भाडा दोब्बर बढ्यो
गाडी नपाउने समस्या मात्रै होइन गाडी सञ्चालकले पहिलेको भन्दा दोब्बर भाडा लिने गरेको गोेरखाका चन्द्रप्रसाद पन्तले गुनासो गर्नुभयो । ‘अघिदेखि नै कुरेको गाडी नै पाएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘पहिलो कुरा त गाडी पाईंदैन । पाए पनि महंगो भाडा भन्छन् ।’
वर्षौपछि भोट हाल्न जाने नागरिक कस्तो उम्मेद्वारलाई भोट हाल्ने भन्ने बारेमा सोच, विचार गरेर घर पुग्ने तयारीमा छन् । दलका नेता र पुरानै एजेन्डा भन्दा पनि स्थानीय स्तरका उम्मेद्वारको क्षमता, योजना हेरेर भोट दिने उहाँको भनाई छ ।
भोट हाल्नैपर्ने, नेताले विकास गर्ने हुन कि नाई ?
लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गर्न पनि भोट हाल्नैपर्ने कलंकीमै गाडी कुर्दै बसेकी धादिङकी धनमाया घले बताउनुहुन्छ । भोट हालेपछि मात्रै गाउँटोलको विकास भए÷नभएको बारे उम्मेद्वारलाई प्रश्न गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
यसअघि आफूले भोट हालेर जिताएका नेताले विकास नगरेपनि यसपटक स्थानीय तहको चुनाव भएकाले भोट हाल्नुपर्ने उहाँको जोड छ । ‘एक भोट त हाल्नैपर्छ । भोट हाले पो भोलि विकास किन गरेनौँ भनेर सोध्न पाइन्छ’ घलेले भन्नुभयो ‘भोट नहाले त कसरी प्रश्न उठाउनु ? त्यसैले भोट हाल्नैपर्छ । यसअघिका नेताले नगरेपनि यसपटक गाउँकै चुनाव हो । एक भोट त हाल्छु ।’
६० वर्ष कटेकालाई भोट नदिने !
तर सुर्खेतका बलराम बानियाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहमा छुट्याइने ६० प्रतिशत बजेटलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न पनि चुनावमा भोट हाल्नैपर्ने बताउनुहुन्छ । चुनावपछि विकासको मुल फुट्ने तर यसका लागि ६० वर्षभन्दा मुनिका युवा उम्मेद्वारलाई भोट हाल्न आफू घर जान लागेको उहाँको भनाई छ ।
‘चुनावपछि विकासको मुल फुट्छ । तर यसका लागि युवालाई भोट दिनुपर्छ । मैले ६० वर्ष कटेकालाई भोट दिनेवाला छैन । युवाले जितेमात्रै देशको विकास हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
ट्राफिक प्रहरी अनुसार सास्ती झेलेरै भएपनि दैनिक एक लाखका दरले १० लाख बढी नागरिक चुनावका लागि काठमाडौंबाट बाहिरिसकेका छन । सरकारले चुनावको दिन आइतबार बिदा दिएको छ । तर त्यो दिन गाडी नचल्ने भएपछि भोलिपल्ट फर्किदा पनि नागरिकले यस्तै सास्ती झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।
त्यसैले घर जादाँ र फर्किदाको धपेडीसँगै योग्य, सक्षम र स्पष्ट योजना भएको उम्मेद्वारलाई पनि भोट दिनुपर्नेे दायित्व नागरिकले भुल्नुहुँदैन ।